Back Ọ All Up ma ọ bụ weghachi na a Click
Ike gwụrụ nke na-enweghị usoro adịkwa stof site na ekwentị gị? Ma eleghị anya, nnọọ na ị chọrọ ime ka mmezi ụlọ n'ihi na ihe media?
Echegbula. Ugbu a, MobileGo for Android Pro (Mac)-ahapụ gị ndabere ihe niile na gị Android ekwentị na-enweghị ihe ọ bụla hassle. Ọzọkwa, ị nwere ike iweghachi họrọ ma ọ bụ niile kwadoo-elu faịlụ gị Android ekwentị na otu Pịa.
Enwe Music, Photos na Video na Go
Wanna enwe media n'oge ọ bụla n'ebe ọ bụla?
MobileGo for Android Pro (Mac)-Enyere gị aka inupụ music, foto na vidiyo mfe ka ekwentị gị na a click.
Ka ọ dịgodị, i nwere ike na-nyefee music si iTunes gị Android ekwentị, ma ọ bụ mbupụ ya site na ekwentị gị iTunes.
Send & Zaghachi Texts seamlessly
Group ide ozi n'ekwe ntị ịzọpụta oge
Ọ dịghị mkpa ka ozi ederede niile enyi otu otu maka ụbọchị ọmụmụ ọzọ, na-eme ememme, wdg MobileGo for Android Pro (Mac)lets ị ederede ha niile na otu oge site na PC gị.
Chekwa mkpa ozi
Chọrọ onwe gị na ekwentị na ebe nchekwa ma na-dị oké mkpa ozi? Ugbu a, i nwere ike ndabere nile ozi gị ma ọ họrọ mkpa eri ka a .txt faịlụ na kọmputa.
Hazie gị égwu effortlessly
Wụnye ma ọ bụ Uninstall égwu
Kpamkpam wụnye mmasị ngwa ma ọ bụ iwepụ na-abaghị uru ngwa ọdịnala na PC
Back elu égwu
Back elu ngwa site gị Android ekwentị na kọmputa.
Otú e si enyere USB Debugging na m ngwaọrụ.